သင်ရုန်းကန်နေရှာတွေ့ဖို့တစ်လျောက်ပတ်တြန္းဂိမ္းချာ? မည်သတင်းကောင်းအကြောင်းသင်အနှံ့လဲရကြမယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက် devotes ကိုယ်တိုင်ကဖို့သင်ပေးနှင့်အတူထိပ်တန်းထစ်လိုးဂိမ်း! နာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၉၊ငါတို့သည်သွားကြပြီထံမှအခွန်အစွမ်းသတ္တိနှင့်များဆွဲဆောင်၏အချို့အများဆုံး diehard အချိန်က၏ပရိသတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုအရည်အသွေးနှင့်ပုံမှန်။ ကျနော်တို့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းအပေါ်ပဲမျိုးစုံ၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတိအကျဘာကိုသိတြန္းညမ်းဂိမ်းကစားမျှော်လင့်:သင်ကိုယ်အဘို့မြင်မကြာမီလုံလောက်တဲ့သောခြေလှမ်းများယူကြပြီဖို့အတူတကွသွင်းထား၏ကြီးမြတ်စုဆောင်းမှု။, ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်ယုံကြည်သောလိုးကားဂိမ်းများသည်အပူဆုံးအစက်အပြောက်အွန်လိုင်းအခုအချိန်မှာလူအဖို့ရှာဖွေနေခံစားကြည့်ပါကြီး XXX တြန္း။ ဤသံတူကြောင်းတစ်ခုခုမှသက်ဆိုင်ရာသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား၊အကောင့်ဖန်တီးရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့ရ! ကျနော်တို့ကြောင်းကတိပေးတံ့သောအရာကိုလက်လှမ်းတွင်းဖြစ်ပါသည်မတူဘဲဘာမှမရှိစဉ်အဆက်မီကိုမြင်:ကျနော်တို့စကားပြောနေကြသည်အမိန့်များ၏ပြင်းအားထက်အခြားလူတိုင်း! နောက်တစ်နည်း၊သငျသညျလိုပါလျှင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိ၊စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်အောက်တွင်ချနှင့်ငါအားငါပေးမည်၊တစ်ခုအတိုချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဒီပလက်ဖောင်း၏။, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာတစ်လျှောက်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားခြင်းအစည်းအဝေး!
သြင္းလူများအတွက်၊အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုရန်၊ပုံတူဟာအတော်လေးရက်စွဲပါအယူအဆ။ ကျနော်တို့မှာကြည့်ရှု၏အောင်မြင်မှုကိုအမျိုးမျိုးသောထိုကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်အဖြစ်ဒဏ္ဍာရီ၏လိဂ်နှင့်လမ်းကြောင်းနှင်သဘောပေါက်ရန်မလိုအပ်လို့သွင်းဖို့လူတွေတက်-ရှေ့စေနိုင်ရန်အတွက်အောင်မြင်တဲ့ဂိမ်း။ သော်ငြားလည်းဤအချက်ကိုအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့အလွန်အစောပိုင်းအပေါ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အမူအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတစ်ဦးအခမဲ့ကစားရန်။ အဘယျသို့ကဒီကိုဆိုလိုသည်၊သင်တို့အဘို့အကြောင်းသင်ပေးနိုင်ဖို့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဘာမှမပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ–သင်လည်းဖြည့်စွက်နိုင်တိုင်းဂိမ်းအတွင်းလိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအမျိုးမျိုးသော microtransactions။, နေစဉ်သင်နိုင်အောင်အမျိုးမျိုးသောဝယ်ယူမှုတိုးတက်လာဖို့သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ၊ဒီလုံးဝကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသူတို့။ ထို့အပြင်၊ငါတို့သည်လည်းပြေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုကြော်ငြာ၏တစ်လျှောက်လုံးအထောက်အကူပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအခွန်ဘဏ္ဍာငွေပြုစုပျိုးထောင်:ဤကြသည်မဟုတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ယေဘုယျနှင့်အတူတြန္းကြော်ငြာနည်းနှင့်မဆို၊ဒါကြောင့်သင်ပင်ကဲ့သို့အဖွင့်အဘယျသို့ပြသ! မှာတကြည့်အခြားပလက်ဖောင်းထွက်ရှိပါတယ်သင်အားသွင်းရုံအတွင်းရှိရရန်သင်ပြောပြအရာအားလုံးကိုသင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်:ကျနော်တို့ထို့ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချ၏အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်သောပေးကမ်းခြင်းကကွာအခမဲ့သည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ခန့်ထားပြီနိုင်ကြောင်း။, သင်အဆင်သင့်ဖြစ်လာမှအပေါ်အတွက်နဲ့ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရာကိုလိုးကားဂိမ်းအားလုံးအကြောင်းပါ? ထိုအခါတက်လက်မှတ်ထိုး၊buddy!
နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာလက်ရာချဉ်းကပ်မှုအလွန်အတုိင္းအတာတစ္ခု၊မထင်ကြဘူးတစ်စက္ကန့်အဘို့အကြောင်းဂိမ်းများအတွက်ကိုယ်အခြေခံအားဖြင့်ကော်ပီကူးခြင်းနှင့်ငါးပိ။ ကျနော်တို့အတော်လေးခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီသေချာစေရန်အကြောင်းရှိ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအတွက်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး၏နံပါတ်အ niches။ ဤအရာသည်အလွန်အရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့လုပ်ကတည်းကကျနော်တို့သိတာကလူတိုင်းရှာဖွေနေသည်အတူတူပင်အမျိုးအစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။, အချို့ခေါင်းစဉ်တွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အတွင်းလိုးကားဂိမ္းအရာကိုမဖြစ်စေခြင်းငှါ၊သင်စဉ်းစားမယ်လို့သင်အကြိုက်ဆုံး၊ဒါပေမယ့်သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်ကတည်းကကျနော်တို့က ၂၄ ဂိမ်းအခုချက်ချင်း၊သင်အလွန်အမင်းဖွယ်ရှိရှာဖွေရန်လျောက်ပတ်သောအခါႏွဖြန့်ချိသောသင်စောင့်ရှောက်မည်ပြုံးညဉ့်လုံးရှည်။ ငါတို့သည်လည်းသိမ်းယူဖို့လွတ်လပ်တက်မွှေအရှည်၏အသီးအသီးဒါကြောင့်ဂိမ်းအချို့အလွန်ရှည်လျားပြီးအချို့တို့သည်အမည်အလွန်တိုတောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နားလည်တချို့လူတွေကအချိန်ပေါ်တိုတောင်းခြင်းနှင့်ရရန်လိုအပ်သည်အလုပ်အကိုင်အပြုအဖြစ်လျင်မြန်စွာတတ်နိုင်သမျှ:စိတ်မပူပါနဲ့၊သင်ဘေးကင်းလုံခြုံလက်၌!, အဆိုပါဂိမ်းအကြောင်းငါတို့သည်လည်းပူဇော်ရသည်မိုဃ်းတိမ်ချွေတာနိုင်စွမ်းကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်၊သင်အနီးကပ်ထဲကမည္သူသူတို့ကိုအချိန်မရွေးသင်ချင်တယ်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၏။ ဤသည်ကိုလည်းနည်းလမ်းများသင်ကြားပြောင်းလဲဖုန်းချောမွေ့၊ဤမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်သင်အသုံးပြုအတူတူအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုအပေါ်အသီးအသီးစက်ကိရိယာ။
ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံအပေါ်တစ်ဦးအနုပညာနယ်ပယ်၊အမြင်အာရုံတိကျမှန်ကန်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးပါသည်။ ယခု၊ငါသည်အသင်းသတ္တဝါများငါးအပြည့်အဝ-အချိန်အနုပညာရှင်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံအတွက်အလိုး။ လိုးကားဂိမ်းများနှမြောကြလိမ့်မည်ရန်မစရိတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လူတိုင်းအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ဂိမ်းမှာပဲ။ ကပြောသည်ဘဲလျက်၊အသီးအသီးအနုပညာရှင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အရသာအပေါ်ယူပါအမျိုးအစား၊အဓိပ္ပာယ်မရှိနှစ်ဦးဂိမ်းများကြည့်ရှုမည်အတိအကျတူညီသည်။ တိကျမှန်ကန်အခြေခံတော်တော်အလွန်အရေးကြီး၊ဒါကြောင့်သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်ကြောင်းရှိသည်သွားဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအတိုအရှည်နိုင်ရန်အတွက်အဘယ်အရာကိုသင်ပြကြီးလိုးဂိမ်းနဲ့တူလှပါတယ်။, ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်များလုံလောက်သောများမှာဆပ်ဖို့အဘို့သင့်တပ်စုဆောင်းခြင်းမှာလိုးကားဂိမ္း:ငါတို့သည်လည်းဆက်လက်ထုတ်ဝေဂိမ်းများဒီဖက်ရှင်အတိုင်းလူတိုင်းထွက်ရှိလက်ခံတွေ့ဆုံကောင်းစွာသူတို့ကို။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်ဒေတာဘေ့စ၏ထုတ္ျဝေးထက်ကျော်လွန်အဘယ်အရာကိုလူတိုင်းကအခြားပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအစေးသည်ဤသည်:အခြားလိုးဂိမ်းအာကာသဘူးတောင်လာဖို့နီးကပ်ပေးခြင်းသင်တိုက်ရိုက်လက်လှမ်းဂိမ်းများသင်ချင်တယ်၊အပေါင်းကျွန်တော်ပြုလံုးသြင္းသင်သည်တစုံတခု! အမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်၊ကစားရန်ပျော်စရာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အပေါ်အပေါင်းတို့၏ထိပ်မှာ:သင်ပိုမိုဘာလိုချင်တယ်?
ပေမဲ့ကျွန်မပြန်လည်အကြောင်းအများကြီးအသုံးဝင်သည်၊အကြောင်းမျှမအမှားလုပ်ပါ၊အဲဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်ဒီအကြောင်းဆွေးနွေး။ ဝမ်းနည်းစရာ၊အဖြစ်အများကြီးကိုရေးတဲ့တနင်္ဂနွေဘယ်လိုအကြောင်းအံ့သြဖွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်၊အခြားတာဝန်များကိုပြုပါရန်။ လျှင်သင်အလေးအနက်ကြောင်းများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းကျနော်တို့အတွင်း၊ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်စဉ်းစားရန်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်နှင့်တစ်ချိန်ကသင့်အကောင့်ကိုဖန်တီး၊ဒါကြောင့်ဖွင့်ကြောင်း။ ရိုးရိုးဝန်၏၊ကောက်တစ်ဂိမ်းကိုသင်ချင်တယ်နှင့်စတင်။, ကျနော်တို့သင်ကိုမြင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှုအပေါ်အခြားဘက်ခြမ်းနှင့်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ကြသကဲ့သို့အများကြီးကစားပျော်စရာဂိမ်းကျနော်တို့ရှိသည်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့။ စောင့်ရှောက်မှုယူ၊မင်္ဂလာ fapping!